ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အရာ ၅ ခုဒါသင်မပြန်ဖြစ်ပါ! - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အရာ ၅ ခုဒါသင်မပြန်ဖြစ်ပါ!
တစ်ဦးက relapse ပထမဦးဆုံးဌာန၌ PMO ဖြတ်ထက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပိုပြီးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဆေးလိပ်ဖြတ်လျှင်သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုဖွင့်လုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေဘုယျအားဖြင့်, က, သငျသညျရရှိပါသည်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လှုံ့ဆျောမှု သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျောထောက်နောက်ခံ။ သို့သော်တစ်ဦး relapse သင်တို့အပေါ်မှာတက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နိုင်ပြီးသင်ကသိကြမီ, သင်မှန်ပြန်စတင်နိုင်ဖို့ပါပဲ။
တစ်ဦးက relapse ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်ရှည်လျားမှီ, စိတျထဲမှာဖြစ်ပျက်။ အစပျိုးခြင်းဆက်ဆက်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာနီးပါးဆက်ဆက်မည်သူမဆိုရဲ့ relapse ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု5အရာဖြစ်ကြ၏။ ဤအရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်ရှည်လျားသောခရီးများအတွက်လှုံ့ဆော်နှင့်ခိုင်ခံ့သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်။
1 ။ ပျင်း:
ပျင်းအမြဲလုံးဝပပျောက်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်, ထိုသို့ရိုးရှင်းစွာလွှဲမရှောင်သာမယ့်ဘယ်အရပ်တစ်နေရာကသင်၏အသက်တာ၌တခဏဖြစ်ရှိခညျြနှောငျရဲ့။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအဲဒီမှာင်ကိုသိပင်ရှေ့မှာရိုက်သည့်အခါမည်မျှကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးကျနော်တို့အပေါက်ဖြည့်ရန်စတင်?
သငျသညျကျောသငျသညျဆိသောအခါမှထင်လျှင်, သင်ချက်ချင်းပျင်းအသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူး။ လူကြီးအဖြစ်, uninterested ခံရသည်ဟုခံစားရခြင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်ကြာပါသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်အသက်တာ၌ချည်းပါပဲ - သင်ပျင်းနေလျှင်အစဉ်အဆက်တွေးမိ? ဒါကြောင့်ပြဿနာများ၏အမြစ်ကိုကြည့်ဖို့အချိန်ရဲ့ - ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်သည်သင်၏ဆက်ဆံရေးပွညျ့စုံမခံစားရဘူး။
အခုတော့ငါသည်သင်တို့ကို, သင့်ဘဝကို ransack ဇောက်ထိုးကဖွင့်နှင့်လူတိုင်းနှင့်သင်ပျင်းဖြစ်စေတဲ့ကြောင်းအရာအားလုံးကိုအင်အားသုံးနှင်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ကြောင်းအကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး။ ယင်းအစားကြောင်းပျက်ပြယ်ဖြည့်ပါနှင့်သင့်အသက်တာကိုဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုကိုရှာပါ။ သငျသညျပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လမ်းမပေါ်မှာဆိုရင်လြှငျ, မခွဲခြားဘဲသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ-count က၏, သင်နီးပါးမလွှဲမရှောင်တစ် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်သောဝိညာဉျသ-နို့စို့ tedium နှငျ့ရငျဆိုငျခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။
·စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းယေဘုယျအားအကြီးမားဆုံးပျင်းဆောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ, လူတွေအကျိုးကိုထိုသူတို့အဘို့မလုံလောက်ပါသည်ကြီးလျှင်စိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်, ဤလမ်းအတွက်, ပျင်းလိုအလြောကျ expunged ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ခံစားမှုဖြစ်သည့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် Find, သင်ဖို့စိတ်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှု, ပြီးတော့သူကလုပ်ပါ။ အကြှနျုပျ၏အကြံပြုချက်ကိုသင် excites နှငျ့သငျသိမ်းပိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသင်၏အသက်တာပိုကောင်းစေသည် (အသစ်သို့မဟုတ်အဟောင်း) တစ်ဝါသနာသို့သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုသွင်းထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
·သစ်ကိုဝါသနာသို့မဟုတ်စီမံကိန်းများအတွက်တချို့ကအကြံပြုချက်များအလုပ်များစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်: သင်ယူခြင်းဂစ်တာသို့မဟုတ်စန်ဒရား, အားကစားရုံကိုသွားသို့မဟုတ်အိမ်မှာထွက်အလုပ်လုပ်; ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်း; ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်။
·ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနှင့်သင့်ပျင်းအသိအမှတ်မပြုရန်စတင်ရယူပါ။ အသစ်စိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ကိုယူကြိုးဖွစျထှနျးလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်မဟုတျဘဲ "တင်းကုပ်" ကိုသတိပြုရကြမည်။ သူကပြောပါတယ်, သင်ဆဲသငျသညျအခွင့်အလမ်းရလာသောအခါအနားယူဘက်သို့အချိန်ထားသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပန်းဖြေ, သင့်ပွညျ့စုံမှ add, သင်၏ပျင်းပိုမိုဆိုးရွားမည်မဟုတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်သင့်သည်။
2 ။ မကျန်းမာလူနေမှုပုံစံ
သငျသညျ = ကျန်းမာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ကိုကြားရကြပြီမည် ကောင်းစွာ, ပြောင်းပြန်ပဲအဖြစ်မှန်သည်။
စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ် connection ကိုလျစ်လျူရှုထားသင့်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာမှထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မမှန်သည်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏လိင်ဘဝ၌သင်တို့၏အကောင်းဆုံးမှာဖျော်ဖြေဖို့မျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။
သို့သော်၎င်းထက်မက - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာအောင်ထားခြင်းကသင့်အားသင်၏စိတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသင်၏အတွင်းစိတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏လိင်ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝသောလိင်ဘဝနှင့်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်တစ်ယောက်နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိရန်ရည်မှန်းချက်နှင့်ပိုနီးကပ်လာသည်။
·သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးမသှနျနှင့်သင့်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ compulsive နှင့် PMO လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံလုပ်ဖို့ထကြွလွယ်သောလိုအပ်ချက်ထိန်းညှိပေးသောသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကူညီပေးပါမည်။
· ကောင်းကောင်းစားပါ; လုံလောကျရေကိုသောက်လော့။ ဒါဟာနီးပါးတိုင်းဆောင်းပါးအပေါ်ထိ, ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအံ့သြဖွယ် overexposed အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါနဲ့အစားအစာများ၏ညာဘက်မျိုးများများစားရကြ, ရေများများမသောက်ရ, တဖန်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လက်ျာဘက်ချအခြေခံကယူလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှည်လျားသောလမ်းအတွက်လုံလောက်သောလောင်စာဆီရှိကြောင်းသေချာစေရန်ချင်တယ်။
·သင်၏အသက်တာအဘို့အ zest နှင့်သင်သွားနိုင်ထင်နောက်ထပ်ထက်သင်ပျော်မွေ့ဘာလုပ်နေလဲနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအားလုံးပြန်ဖြစ်။ လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်မျိုးစုံကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်, အခြားသူများအကြားက pent-up, စွမ်းအင်ဖြန့်ချိစိုးရိမ်စိတ် calms နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရယူနိုင်ပါတယ်စောင့်ရှောက်။ လေ့ကျင့်ခန်းကိုမမျှမအကြောင်းပြချက်။
3 ။ မလိုအပ်သောသွေးဆောင်
သိမ်မွေ့်ဗလာနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာယနေ့ခေတ်ရုံအကြောင်းကိုနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ အလုပျသမဂ္ဂဇင်းကနေ HBO အပေါ် Thrones ၏ဂိမ်းရန်, လိင်ရောင်းချနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကသိတယ်။ တောင်မှသက်ဆိုင်တဲ့ကြော်ငြာတွေလိင်အချက်၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, cable ကိုတီဗီ, porn ကိုပစ်မှတ်ထားမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ညစ်ညမ်း related ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးပိုကြီးသွေးဆောင်မှုကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
သိ သင့်ရဲ့ခလုတ်ကောင်းကောင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ပေါ်တွင်အလုပ်ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေလျစ်လျူရှု။ ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့ကိုအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာများသိကြဝက်ဘ်ဆိုက်ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်သင့်အားထုတ်မှုကိုပြုပြင်လိုသောနိုင်ပါတယ်။ YouTube ကိုမကြာခဏ PMO ဖို့လမ်းကြောင်းကိုချသငျသညျဦးဆောင်စောင့်ကြည့်နေလျှင်, သင်တစ်ဦးတည်းအနေဖြင့်အခါရှောင်ကြဉ်ခြင်းစဉ်းစားသင့်။
·သင်တဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်သွားချင်လျှင်, filter များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ သင့် browser နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကြေးပေးသွင်းဖို့။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာအနည်းငယ်ထူးဆန်းပုံရပေမည်, သို့သော်အထူးသဖြင့်သွေးဆောင်မှုက၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးမှာသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်နှင့်ရက်သတ္တပတ်ထဲမှာသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။
·သင်ပြီးသား porn sites များဆီသို့ဦးတည်ပါလိမ့်မယ်ကိုသိသောအရာတို့ကိုရှာဖွေရာမှခြုပျ။ လူအတော်များများဟာသူတို့တစ်တွေ porn site ပေါ်တွင်တက်အဆုံးသတ်ချိန်အထိသူတို့ပင်ရုမ်းမင်းသတိထားမဟုတ် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချပြီးနောက်သတင်းပို့ပါ။
4 ။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူစမ်းသပ်
Recovery ကိုယဇျပူဇျောလိုအပ်ပြီးတစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံသင်အဆုံးရည်မှန်းချက်ဆီသို့သေးငယ်အပြုသဘောခြေလှမ်းများကိုယူပြီးအားရကျေနပ်မှုဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးတိုတောင်းသောကာလအပြီးရေကိုလို့ရပါတယ်စမ်းသပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, relapse စာလုံးပေါင်း။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာ "Oh, ဒီမှာအချို့ညစ်ညမ်းရဲ့" ကို "ငါ, ငါ့စိုက်ထူစမ်းသပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်" မှတိုတောင်းတဲ့ခုန်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတူကစမ်းသပ်မနိုင်မဆိုလိုပေ - သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုခံစားရသည့်အခါ။ ကိုသတိရပါ, ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအရာဝတ္ထုအံ့သြခြင်းနှင့်အဘို့အသင့်ဦးနှောက် rewire ရန်ဖြစ်ပါသည် ကျန်းမာသော လိင်ကြောင့်လုံးဝလိင်မှရှောင်ကြဉ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
·အပြုသဘောဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကို, သင့်စိတ်နှင့်သင့်လက်ထားပါ။ သင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနိုင်ရှိရာအချို့သောတစ်ဦးတည်းအချိန်ဆီသို့လှည့်လည်ခြင်းငှါခံစားရလျှင်, သင် PMO အဘို့သင့်အလိုဆန္ဒ၏ချွတ်သင်တို့၏အကြံအစည်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားအာရုံစူးစိုက်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စီမံကိန်းကိုစတင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လိုအပ်ချက်ကာလ၌တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အရေးပေါ်စာရင်းရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနည်းလမ်းကသင့်စိတ်ကိုထားပြီးသူကဖြစ်ပျက်အောင်အာရုံစိုက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်တစ် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်ဟုမမြဲသောလှုပ်ရှားမှုများကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
5 ။ လူမှုအထီးကျန်ထားခြင်း
ပြည်သူ့လူမှုရေးသတ္တဝါဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပင်လူကန်လန်။ ငါကတက်နိုက်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး - ကိုယ့်ရိုးရှင်းတဲ့အပြန်အလှန်နှင့်အခြားလူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အလမ်း။ ကျနော်တို့ကလိုအပ်တယ်ငါတို့သည်အပေါ်ရှင်သန်။
လူအပေါင်းတို့သည်သိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကောင်းသောကုမ္ပဏီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှေ့ကိုရွှေ့ဖို့ကိုဆက်လက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့မိတ်အသံနဲ့ကျန်းမာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ချင့်တဲ့အခါမှာတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုမလုံလောကျသညျ့အခါတျသှငျးခံများနှင့်လှုံ့ဆော်သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးက။ သငျသညျအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တဲ့အခါတိတ်ဆိတ်ထောက်ခံမှုဖြစ်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကအဘယ်သူသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ်။
·အသကျရှငျကသင်၏မိတ်ထားပါ။ မကြာခဏဆိုသလိုစှဲသူတို့၏ကျန်းမာမိတ်မှလူခွဲထုတ်ဘူးနှင့်အသစ်ဆက်သွယ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းတင်းမာနေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသင်တန်း၏, ဇာတ်ကောင်ထဲကကြောင်းကိုဘာမှလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ခဏအတွင်းတစ်ချိန်ကသင်တို့၏သက်သာဇုန်၏ထွက်ဖို့ကြိုးစားကြဘူး။
·ချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ကိုယ်တော်ကြောင့်မလုပ်ကြပါဘူး။ တစ်ဦးလက်ရုံးတစ်ယောက်ရယူပါ။ ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ပေမယ့်အမှုကိုစီရင်ခြင်းထက်, ကငြင်းပယ်ခံရအတူပါလာသောအပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုဖွင့်ကပြောသည်။
ဖြုန်းမနေပါနဲ့ တစ်ဦးတည်းသိပ်အချိန်။ အထီးကျန်ရိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျအရာတစ်ခုခုနဲ့ပျက်ပြယ်ဖြည့်ရန်သွေးဆောင်ခံရပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့နီးပါးသင်သည်သင်၏ပုံမှန်အတိုင်းဒုဖို့ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းအာမခံပါတယ်။ ထွက် သွား. အချို့မိတ်ဆွေများကပါစေ။
ဒီအချက်ပေါ်တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ခြမ်းမှတ်စုအဖြစ်, မိတ်ဆွေများဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အဖွဲ့ဝင်များကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ မကြာခဏကြိမ်အချစ်ဇာတ်လမ်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခံရပင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့် PMO စွဲနှင့်အတူထုပ်ပေးထားလာသောအခြားစိတ်ခံစားမှုတာကတော့စိတ်ဓာတ်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မပေးသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်, ခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။
ရဲစွမ်းသတ္တိကတော့သတ္တိနှာ, ဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူရလိမ့်မည်။ သငျသညျပကျြကှကျလြှငျ, ကြိုးစားနေကျရှုံးနှင့်သင်လဲလျှင်, မြေမှုန့်ကိုခါလိုက်နဲ့တက်ရ! နေရောင်ကိုပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုမှာအသစ်တခုအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအသီးအသီးနံနက်ထ။
ဘရိုင်ယန်ပန်းခြံဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါသည် reboot အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းယောက်ျား porn နုတ်ထွက်နှင့်၎င်းတို့၏လိင်ဘဝတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်းမှအပ်နှံလိုက်တယ်။ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလိုအပ်ပါသလား? ဤတွင် 50 ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်င်.